Faallo - Editorials on Voice of America
Howsha adag ee sugeyga dowladda cusub ee Soomaaliya
16-kii May, baarlamaanka Soomaaliya ayaa madaxweyne cusub u doortay Hassan Sheikh Mohamud. Doorashada ayaa aheyd natiijo kasoo baxday hannaan waqti dheer socday oo marar badan dib u dhacay.
Blinken oo ka hadlay cunto yarida adduunka ee xilligan
Shanti sano ee lasoo dhaafay, “Tirada dadka la nool cunto-yarida baahsan ayaa cirka isku sii shareertay, taasoo gaartay 161 milyan oo ruux halki ay marki hore aheyd 108 milyan guud ahaan caalamka.” Sidaasi waxaa yiri Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka Antony Blinken.
Taalibaan oo si weyn u xaddideysa xuquuqda haweenka
Afhayeenka Waaxda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa isaga oo ku sugan Washington wariyaasha u sheegay, in Taliban ay sii waddo qaadashada siyaasado lagu caburinayo haweenka, halki ay wax ka qaban lahaayeen dhibaatooyinka dhaqaale iyo guuldarrooyinka loo dhanyahay ee dowlad-xumida ee Afghanistan.
Finland iyo Sweden waxay dalbanayaan xubinnimada NATO
18-ki bishi May, Dowladaha Finland iyo Sweden ayaa diray codsiga ay ku dalbadeen xubinnimada gaashaanbuurta NATO. Dalabka dalalkaan ayaa ah natiijo toos uga dhalatay dagaalka macno-darrada ah ee uu taliska Putin ku qaaday waddanka ay jaarka yihiin ee Ukraine.
Koronto la isku halayn karo ee dalalka Afrika ee ka hooseeya Saxaraha
Korontada ayaa ah mid aan la isku halayn karin marka la joogo Afrikada Saxaraha ka hooseeya. Korontada oo go’daa ayaa si gaar ah u saamaysa xirfadda caafimaadka iyo tayada daawaynta ay heli karaan bukaanada.
USAID waxay dabooshay Baahiyaha Cunto ee Galbeedka Afrika
Wakaaladda Mareykanka ee Horumarinta Caalamiga ah ee loo soo gaabiyo USAID, waxay bixineysaa in ka badan 311 milyan oo dollar gargaar bani’aadannimo oo dheeraad ah, oo loogu tala galay 3.8 milyan oo ruux oo ay cunto-yari ku heysato gobollada Sahel iyo Lake Chad Basin ee Galbeedka Africa.
Talaabooyinka lagu soo afjarayo colaadda Itoobiya
Malaayiin qof oo ku nool Ethiopia ayaa wali wajahaya xaalado cunti yari aad u daran iyo gaajo xad-dhaaf ah, kuwaasi oo ah natiijo si toos ah uga dhalatay colaadda dalkaasi ka taagan.
Mareykanka oo gargaar dheeri ah siinaya Geeska Afrika
Argagixiye ka tirsan Daacish oo cadaaladda wajahay